आधिकारिक भारतीय भिसा, आवेदन - भारतीय eVisa लागू गर्नुहोस्
भारतीय ई भिसा
भारतीय भिसा अनलाइन लागू गर्नुहोस्
भारतीय भिसा आवेदन
भारतीय eVisa के हो (वा भारतीय भिसा अनलाइन)
भारत सरकार भारतको लागि इलेक्ट्रोनिक यात्रा प्राधिकरण वा eTA सुरु गरेको छ जसले नागरिकहरूलाई अनुमति दिन्छ 180 देशहरूले पासपोर्टमा भौतिक मुद्राङ्कन आवश्यक बिना भारत भ्रमण गर्न। यो नयाँ प्रकारको प्राधिकरणलाई eVisa India (वा इलेक्ट्रोनिक भारत भिसा) भनिन्छ।
यो यो इलेक्ट्रोनिक हो भारत भिसा अनलाइन जसले विदेशी पर्यटकलाई भारत भ्रमण गर्न अनुमति दिन्छ5प्रमुख उद्देश्यहरू, पर्यटन / मनोरञ्जन / छोटो अवधि पाठ्यक्रमहरू, व्यापार, चिकित्सा भ्रमण वा सम्मेलनहरू। प्रत्येक भिसा प्रकार अन्तर्गत उप-श्रेणीहरूको थप संख्याहरू छन्।
सबै विदेशी यात्रुहरूले भारत प्रवेश गर्नु अघि भारत eVisa (इंडिया भिसा अनलाइन आवेदन प्रक्रिया) वा नियमित / कागज भिसा राख्नु पर्छ। भारत सरकारको अध्यागमन प्राधिकरणहरू.
नोट गर्नुहोस् कि यिहरु बाट यात्रीहरु १ countries० देशहरू, जुन आवेदन गर्न योग्य छन् भारत भिसा अनलाइनका लागि भारत भिसा पाउने उद्देश्यका लागि भारतीय दूतावास वा भारतीय उच्चायोग भ्रमण गर्न आवश्यक छैन। यदि तपाईं एक योग्य राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भारत भिसा अनलाइन। एक पटक भारतको भिसा इलेक्ट्रॉनिक ढाँचामा जारी भैसके पछि तपाई या त आफ्नो मोबाइल उपकरणमा इलेक्ट्रोनिक प्रतिलिपि बोक्न सक्नुहुनेछ वा यस eVisa इंडिया (इलेक्ट्रॉनिक भारत भिसा) को मुद्रित प्रतिलिपि। बोर्डरमा अध्यागमन अधिकारीले सम्बन्धित राहदानी र व्यक्तिका लागि प्रणालीमा eVIS भारत मान्य छ कि छैन जाँच्न सक्छन्।
खरीद वा ईविसा भारतको भारतीय भिसा अनलाइन विधि भारतमा मनपराउने, सुरक्षित र विश्वासयोग्य विधि हो। कागज वा परम्परागत भारत भिसालाई भारत सरकारले विश्वास गर्ने तरीकाका रूपमा लिदैन। थप रूपमा यात्रुहरूको लाभका रूपमा उनीहरूले भारतीय भिसा सुरक्षित गर्न स्थानीय भारतीय दूतावास / वाणिज्य दूतावास वा उच्च आयोगमा जानु आवश्यक पर्दैन किनकि यो भिसा अनलाइन लिन सकिन्छ।
भारत eVIS का प्रकार
त्यहाँ छन्5भारत eVisa को उच्च स्तर प्रकार (भारत भिसा अनलाइन आवेदन प्रक्रिया)
पर्यटन कारणका लागि, ई-पर्यटक भिसा
व्यापार कारणका लागि, e-Business भिसा
चिकित्सा कारणहरूको लागि, ई-मेडिकल भिसा
चिकित्सा परिचरक कारणहरूको लागि, e-MedicalAttendant भिसा
सम्मेलन कारणहरूका लागि, ई सम्मेलन भिसा
पर्यटक भिसा पर्यटन, दृश्यावलोकन, साथीभाइ भेट्न, आफन्त भेट्न, छोटो अवधिको योग कार्यक्रम, र यहाँ सम्म कि उद्देश्यका लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ। 1 अवैतनिक स्वयंसेवक कामको महिना। यदि तपाइँ एक को लागी आवेदन गर्नुहुन्छ भारतीय भिसा अनलाइन, तपाईं वर्णन कारणका लागि यसको लाभ लिन योग्य हुनुहुन्छ।
भारतमा ब्यावसायिक भिसा आवेदकहरूले बिक्री / खरीद वा व्यापारको लागि, प्राविधिक / व्यापार बैठकहरूमा उपस्थित हुन, औद्योगिक / व्यापार उद्यम स्थापना गर्न, भ्रमण गर्न, लेक्चर (वितरण) गर्न, जनशक्ति भर्ती गर्न, प्रदर्शनहरूमा भाग लिनका लागि आवेदकहरू द्वारा लिन सक्दछन्। वा व्यवसाय / व्यापार मेलाहरू, एक चलिरहेको प्रोजेक्टको सम्बन्धमा विशेषज्ञ / विशेषज्ञको रूपमा कार्य गर्न। यदि तपाईं वर्णन गरिएको उद्देश्यको लागि आउँदै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं एकको लागि योग्य हुनुहुन्छ भारत भिसा अनलाइन आवेदन प्रक्रिया.
भारत भिसा अनलाइन वा भारत ईवीसा प्राप्त गर्न के आवश्यक छ
यदि तपाईंले एक भारतीय भिसा आवेदन प्रक्रिया प्रति यस वेबसाइटमा अनलाइन विधि पूर्ण प्रतिबद्ध गर्नुभयो भने, त्यसपछि तपाईंलाई निम्न प्रक्रियाको लागि योग्य हुन आवश्यक छ:
तपाईंको राहदानी विवरण
तपाईंको ठेगाना विवरणहरू
एक मान्य ईमेल ठेगाना
डेबिट / क्रेडिट कार्ड वा PayPal द्वारा भुक्तान
राम्रो चरित्र को हुनु र कुनै आपराधिक इतिहास छैन
भारतीय ई-भिसा प्रमुख बिन्दुहरू
सम्म रहन सक्नुहुन्छ 180 दिनहरूमा 1 भारतको लागि वर्ष पर्यटक भिसा।
भारतीय भिसा अनलाइन प्रक्रियाबाट प्राप्त गरिएको इ-भिसा भारत प्रयोग गर्न सकिन्छ धेरै पटक क्यालेन्डर वर्षमा उदाहरण को लागी जनवरी देखि डिसेम्बर बीच
मा समाप्ति मिति 30 डे टुरिस्ट इन्डिया भिसा भारतमा बस्ने वैधतामा लागू हुँदैन, तर भारतमा प्रवेशको अन्तिम मितिमा लागू हुन्छ।
योग्य राष्ट्रियताका उम्मेदवारहरू कम्तिमा अनलाइन आवेदन गर्नुपर्छ4प्रवेशको मिति भन्दा दिन अगाडि.
भारतीय eVisa वा इलेक्ट्रॉनिक भारत भिसा अनलाइन रूपान्तरण, गैर विस्तार योग्य र गैर रद्द योग्य हो।
इलेक्ट्रॉनिक भारतीय भिसा अनलाइन वा eVIS भारत संरक्षित / प्रतिबन्धित वा छावनी क्षेत्रहरूको लागि वैध छैन।
यो पासपोर्टको लागि वैध हुनुपर्छ6भारतमा अवतरण भएको मिति देखि महिना.
विश्वव्यापी यात्रुहरूलाई भारतीय भिसा अनलाइन पेश गर्न उडान टिकट वा होटल बुकिङको प्रमाण आवश्यक छैन।
आगन्तुकहरूले उनीहरूको अनुमोदित eVisa भारत प्राधिकरणको नक्कल भन्नुपर्दछ जुन उनीहरूको भारतमा रहँदा निरन्तर रहेको छ।
सबै उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत पहिचान हुनुपर्दछ, तिनीहरूको उमेरको बाबजुद।
भारतीय भिसा अनलाइन आवेदनको लागि आवेदन गर्ने अभिभावकहरूले आफ्नो आवेदनमा उनीहरूको बच्चा (रेन) लाई समावेश गर्नु हुँदैन। भारतीय भिसा प्रत्येक व्यक्तिबाट छुट्टै आवाश्यक हुन्छ, भारतमा समूह भिसा वा परिवारका लागि भिसाको अवधारणा हुँदैन।
आवेदकको राहदानी कुनै पनि अवस्थामा हुनुपर्छ2माइग्रेसन र अध्यागमन र सीमा विशेषज्ञहरूका लागि भारतमा प्रवेश/निकास छाप्नका लागि पृष्ठहरू खाली गर्नुहोस्। तपाइँलाई यो प्रश्न विशेष गरी सोधिएको छैन जब तपाइँ एक भारत भिसा को लागी अनलाइन आवेदन गर्नुहुन्छ तर तपाइँ यो तथ्यलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ कि तपाइँको पासपोर्ट हुनु पर्छ।2खाली पृष्ठहरू।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल कागजात वा कूटनीतिक पासपोर्ट राख्ने उम्मेदवारहरूले eVisa भारतको लागि आवेदन दिन सक्दैनन्। भारत भिसा अनलाइन आवेदन प्रक्रिया साधारण पासपोर्ट धारकको लागि मात्र हो। शरणार्थी यात्रा कागजात धारक पनि आवेदन गर्न योग्य छैनन् र भारतीय भिसा अनलाइन। यस श्रेणीसँग सम्बन्धित प्रयोगकर्ताहरूले एक स्थानीय दूतावास वा भारतीय उच्चायोग मार्फत भारतीय भिसाका लागि आवेदन दिनै पर्दछ। भारत सरकारले त्यस्तो नीति कागजातहरू यसको नीति अनुसार इलेक्ट्रॉनिक भिसाका लागि योग्य हुन अनुमति दिदैन।
भारतीय भिसा आवेदन प्रक्रिया
एक eVIS भारत को लागी इंडिया भिसा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण अनलाइन छ। भारतीय दूतावास वा भारतीय उच्चायोग वा भारत सरकारको कुनै पनि अफिसको भ्रमण गर्न आवश्यक छैन। सम्पूर्ण प्रक्रिया यस वेबसाइटमा पूरा गर्न सकिन्छ।
नोट गर्नुहोस् कि eVIS भारत वा इलेक्ट्रॉनिक भारतीय भिसा अनलाइन जारी गर्नु अघि, तपाईंलाई तपाईंको पारिवारिक सम्बन्ध, आमाबाबु र पति / पत्नीको नाम सम्बन्धी थप प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ र राहदानी स्क्यान प्रतिलिपि अपलोड गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं यी अपलोड गर्न वा कुनै प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्षम हुनुहुन्न, तब तपाईं हामीलाई समर्थन र सहयोगका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं व्यापार उद्देश्यका लागि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई भारतीय संस्था वा कम्पनीको सन्दर्भ पनि सोध्न सकिन्छ जुन भ्रमण गरिएको छ।
औसत भारत भिसा आवेदन प्रक्रिया पूरा हुन केहि मिनेट लाग्छ, यदि तपाईं कुनै पनि बिन्दुमा अड्किनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो समर्थन टोलीको सहायता लिनुहोस् र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् फारम प्रयोग गरेर यस वेबसाइटमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
भारतीय भिसा आवेदन फाराम पूरा गर्नका लागि आवश्यकताहरू र मार्गदर्शन
भारतको लागि भिसा आवेदन फारमका लागि व्यक्तिगत प्रश्नहरूको जवाफ, राहदानी विवरण र चरित्र विवरण आवश्यक पर्दछ। एकचोटि भुक्तानी सकिएपछि, त्यसपछि भिसाको लागि आवेदन गरिएको प्रकारमा निर्भर रहँदै, लिंकले तपाईंलाई पठाइन्छ स्क्यान प्रतिलिपि अपलोड गर्न आवश्यक ईमेलले पठाईन्छ। राहदानी स्क्यान प्रतिलिपि तपाईको मोबाईल फोनबाट पनि लिन सकिन्छ र स्क्यानरबाट जरूरी छैन। अनुहार फोटो पनि आवश्यक छ।
यदि तपाईं व्यापार उद्देश्यका लागि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए एक भ्रमण कार्ड वा व्यवसाय कार्ड भारतीय ब्यापार भिसाका लागि आवश्यक छ। भारत मेडिकल भिसाको मामलामा तपाईंलाई यस अस्पताल वा क्लिनिकबाट पत्रको प्रतिलिपि वा फोटो प्रदान गर्न अनुरोध गरिनेछ जहाँ तपाईंको उपचारको योजना छ।
तपाईंले कागजातहरू तुरून्त अपलोड गर्न आवश्यक पर्दैन, तर तपाईंको अनुप्रयोगको मूल्या after्कन पछि मात्र। तपाईलाई अनुरोध गरीन्छ कि आवेदन फारम को विस्तृत आवश्यकताहरु को माध्यम बाट जान। यदि तपाईंलाई अपलोडमा कुनै समस्या छ भने, त्यसोभए तपाईं हाम्रो मद्दत डेस्कलाई ईमेल गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
यो अनुरोध गरिएको छ कि तपाइँ तपाइँको लागि उपलब्ध गराईएको मार्गदर्शन मार्फत पढ्नुहोस् अनुहार फोटो आवश्यकता र राहदानी स्क्यान प्रतिलिपि आवश्यकता भिसाका लागि। सम्पूर्ण अनुप्रयोगको लागि पूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध छ पूर्ण भिसा आवश्यकताहरु.
एयरपोर्टहरू जहाँ भारतीय भिसा अनलाइन (eVisa India) प्रयोगको लागि मान्य छ
eVisa India (इलेक्ट्रोनिक इंडिया भिसा, जसलाई भारतीय भिसाको समान सुविधा छ) भारत प्रवेश गर्नका लागि मात्र निम्नलिखित निर्दिष्ट एयरपोर्ट र बन्दरगाहमा मान्य छ। अर्को शब्दमा, सबै विमानस्थलहरू र बन्दरगाहहरूले ईवीसा भारतमा भारत प्रवेश गर्न अनुमति दिँदैन। एक यात्रीको रूपमा onus तपाईं मा छ कि यो निश्चित गर्न कि तपाईंको यात्रा कार्यक्रमले यस इलेक्ट्रोनिक भारत भिसाको उपयोग गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं भारत प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ एक भूमि सीमा, उदाहरण को लागी, तब यो इलेक्ट्रोनिक भारत भिसा (eVisa भारत) तपाईंको यात्रा को लागी उपयुक्त छैन।
निम्नलिखित २ air एयरपोर्टहरूले यात्रीहरूलाई भारतमा इलेक्ट्रोनिक भारत भिसा (eVisa भारत) मा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छन्:
क्रूज जहाज यात्रुहरूको फाइदाको लागि, भारत सरकारले निम्न सुविधाहरू पनि प्रदान गरेको छ5प्रमुख भारतीय बन्दरगाहहरू इलेक्ट्रोनिक भारत भिसा (eVisa भारत) धारकहरूको लागि योग्य हुन:
इविसामा भारत छोड्दै
तपाईंलाई इलेक्ट्रोनिक इन्डिया भिसा (eVisa India) मा भारत प्रवेश गर्न अनुमति दिइन्छ2यातायात, हवाई र समुद्र को साधन। जे होस्, तपाइँ एक इलेक्ट्रोनिक भारत भिसा (eVisa भारत) मा भारत छोड्न / बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ4 यातायातका साधन, हावा (विमान), समुद्र, रेल र बस। भारतबाट बाहिर निस्कनका लागि निम्न निर्दिष्ट अध्यागमन चेक पोइन्टहरू (ICPs) लाई अनुमति दिइएको छ। (34 विमानस्थल, भूमि अध्यागमन जाँच बिन्दुहरू,31 बन्दरगाह,5रेल चेक पोइन्टहरू)।
अगाती र मिनिकॉय टापु लक्षद्वीप यूटी
मुनाबाओ रेल चेक पोस्ट
अटारी रेल चेक पोस्ट
Gede रेल र रोड चेक पोस्ट
हरिदासपुर रेल चेक पोस्ट
चितपुर रेल चेकपोस्ट
भारतीय ई-भिसा योग्य देशहरू
तल सूचीबद्ध देशहरूका नागरिकहरू अनलाइन भिसा भारतको लागि योग्य छन्।
एंटिगुआ र बारबुडा
बोस्निया र हर्जेगोविना
क्यामरून युनियन गणतन्त्र
चीन- SAR हkकong
चीन- SAR मकाउ
सेन्ट क्रिस्टोफर र नेभिस
टर्क्स र क्याकोस टापु
भ्याटिकन सिटी - होली हेर्नुहोस्
इविसा भारत आवेदकहरूको लागि आवश्यक कागजातहरू
यदि तपाईं मनोरञ्जन/पर्यटन/छोटो अवधिको पाठ्यक्रमको उद्देश्यका लागि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो अनुहारको फोटो र राहदानी बायो पृष्ठको तस्विर मात्र अपलोड गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईं व्यापार, प्राविधिक बैठक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले अघिल्लो बाहेक आफ्नो इमेल हस्ताक्षर वा व्यापार कार्ड पनि अपलोड गर्न आवश्यक छ।2कागजातहरू। चिकित्सा आवेदकहरूले अस्पतालबाट एक पत्र प्रदान गर्न आवश्यक छ।
तपाईं आफ्नो फोनबाट फोटो लिन सक्नुहुनेछ र कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस्। कागजातहरू अपलोड गर्नका लागि लिंक प्रदान गरिएको छ हाम्रो प्रणालीबाट एक ईमेल द्वारा दर्ता गरिएको ईमेल आईडीमा पठाइएको सफलतापूर्वक भुक्तानी भएपछि। तपाईं यसको बारेमा बढी पढ्न सक्नुहुन्छ कागजातहरू यहाँ आवश्यक छ.
यदि तपाईं कुनै पनि कारणको लागि तपाईंको eVisa इंडिया (इलेक्ट्रोनिक भारत भिसा) मा सम्बन्धित कागजातहरू अपलोड गर्न सक्षम हुनुहुन्न भने, तपाईं पनि तिनीहरूलाई हामीलाई ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं कुनै पनि १ 132२ मुद्रामा भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ र डेबिट / क्रेडिट / चेक / Paypal विधिहरू सहित भुक्तान विधिहरू। नोट गर्नुहोस् कि रसिद भुक्तानी गर्ने समयमा प्रदान गरिएको ईमेल आईडीमा पठाइन्छ। भुक्तानी अमेरिकी डलरमा चार्ज हुन्छ र तपाईंको इलेक्ट्रोनिक भारत भिसा आवेदन (eVisa भारत) को लागि स्थानीय मुद्रामा रूपान्तरण।
यदि तपाईं भारतीय ईवीसा (इलेक्ट्रोनिक भिसा भारत) को लागि भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्न भने सबैभन्दा सम्भावित कारण यो हो कि यो अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेन तपाईंको बैंक / क्रेडिट / डेबिट कार्ड कम्पनी द्वारा ब्लक गरिएको छ। कृपया तपाईंको कार्डको पछाडि फोन नम्बर कल गर्नुहोस्, र भुक्तानी गर्न अर्को प्रयास गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, यसले मुद्दाको बहुमतमा समाधान गर्दछ।
के भारत eVisa पासपोर्ट मा एक टिकट हो?
अध्यागमन अधिकारीलाई तपाइँको पीडीएफ / इ-मेल प्रिन्टआउट मात्र चाहिन्छ र भारत इवीसा उही राहदानीमा जारी गरिएको छ भन्ने प्रमाणिकरण गर्नु पर्छ।
भारत eVisa अब पारंपरिक भारत भिसा जस्तो राहदानी मा टिकट छैन तर यो एक इलेक्ट्रॉनिक जारी प्रतिलिपि ईमेल द्वारा आवेदकलाई पठाइएको छ।
नोभेम्बरमा 2014 , भारत सरकारले भारत eVisa / इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन (ETA) सुरु गर्‍यो र यो भन्दा बढीका बासिन्दाहरूका लागि अपरेशनल भयो। 164 अवतरणमा भिसाका लागि योग्य व्यक्तिहरू सहित योग्य राष्ट्रहरू। रनडाउन थप विस्तार गरिएको थियो 113 अगस्टमा राष्ट्रहरू 2015 ETA यात्रा उद्योग, प्रियजनहरूलाई भेट्न, छोटो चिकित्सा पुनर्स्थापना उपचार र व्यापार भ्रमणहरूको लागि जारी गरिएको छ। योजनाको नाम बदलेर e-Tourist Visa (eTV) राखिएको थियो 15 अप्रिल 2015 । खुला 1 अप्रिल 2017 योजनाको नाम ई-भिसा राखिएको थियो3उपश्रेणीहरू: ई-पर्यटक भिसा, ई-व्यापार भिसा र ई-मेडिकल भिसा।
कुनै पनि घटनामा ई-भिसाको लागि आवेदन दिनुपर्छ4अवतरणको मितिको समय अगाडी दिनहरू तय गर्नुहोस्। आगन्तुक eVisa को लागी उपलब्ध छ 30 दिन, 1 वर्ष र5वर्षहरू। 30 दिन eVisa को लागी अनुमति छ 30 दिन र डबल प्रविष्टि। निरन्तर लागि रहनुहोस् 1 वर्ष र5वर्ष आगन्तुक / पर्यटक eVisa को लागी अनुमति छ 90 दिन र धेरै प्रविष्टिहरू। व्यापार eVisa को लागी मान्य छ 1 वर्ष र धेरै प्रविष्टिहरूलाई अनुमति दिइएको छ।
भारत सरकार भारतीय दूतावास वा भारतीय वाणिज्य दूतावासको भौतिक भ्रमणको आवश्यकता पर्दैन भारत eVisa जारी गर्न। यस वेबसाइटले प्रयोगकर्ताहरूलाई भारत (India eVisa) लाई इलेक्ट्रोनिक भिसा जारी गर्न आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। यस वेबसाइटमा, प्रयोगकर्ताले पर्यटक भिसाको मामलामा आफ्नो यात्राको उद्देश्य र अवधि चयन गर्न आवश्यक छ।3भारत भिसाको अवधि पर्यटन उद्देश्यका लागि अनुमति दिए अनुसार सम्भव छ भारत सरकार वेबसाइट विधि प्रयोग गर्दै, 30 दिन, 1 वर्ष र5वर्षहरू।
5 व्यापार यात्रुहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि उनीहरूलाई जारी गरिएको छ 1 भारतको लागि वर्ष eBusiness भिसा (India eVisa) यदि उनीहरूलाई व्यापार बैठकको लागि केही दिनको लागि प्रवेश गर्न आवश्यक छ भने। यसले व्यापार प्रयोगकर्ताहरूलाई अर्कोको लागि कुनै पनि पछिल्ला भ्रमणहरूको लागि अर्को भारत eVisa आवश्यक पर्दैन 12 महिना। व्यवसायिक यात्रुहरूको लागि भारत भिसा जारी गर्नु अघि, उनीहरूलाई कम्पनी, संगठन, उनीहरूले भारतमा भ्रमण गरिरहेको संस्था र उनीहरूको आफ्नै देशमा रहेको आफ्नै संगठन/कम्पनी/संस्थाको विवरणहरू सोधिनेछ। इलेक्ट्रोनिक व्यापार भारत भिसा (भारत eVisa वा eBusiness भिसा भारत) मनोरन्जन उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन। द भारत सरकार पर्यटकको भ्रमणको मनोरञ्जन / दर्शनीय पक्षलाई भारत भ्रमणको व्यवसाय प्रकृतिबाट अलग गर्दछ। व्यापारका लागि जारी गरिएको इलेक्ट्रोनिक भारत भिसा वेबसाइट विधि मार्फत अनलाइन जारी गरिएको टुरिस्ट भिसा भन्दा फरक छ।
एक यात्रीले पर्यटनको लागि भारत भिसा र व्यापारको लागि भारत भिसा एकै समयमा धारण गर्न सक्छ किनभने तिनीहरू पारस्परिक रूपमा विशेष उद्देश्यका लागि हुन्। यद्यपि, मात्र 1 व्यापारको लागि भारत भिसा र 1 पर्यटनको लागि भारत भिसा एक समयमा अनुमति छ 1 राहदानी। भारतको लागि बहु पर्यटक भिसा वा भारतको लागि बहु व्यापार भिसालाई एकल राहदानीमा अनुमति छैन।
इलेक्ट्रोनिक इंडिया भिसा (eVisa भारत) फाइल गर्ने वेबसाइट विधिलाई अधिक विश्वसनीय, विश्वसनीय, सुरक्षित र छिटो र प्रयोगकर्ताहरूको लागि सुरक्षित मानिन्छ। भारत सरकार.
जहाँसम्म, भारत भिसाका लागि भारत भिसाका लागि अनुमति दिइएको कोटीहरूको संख्या / भारत भिसाका लागि इलेक्ट्रोनिक विधि तलका सहित सीमित उद्देश्यका लागि हो।
पर्यटक भिसा भारत को लागी
साथीहरू र आफन्तहरूलाई भेट्न
छोटो अवधि योग कार्यक्रम
स्थानीय भाषा, संगीत, नृत्य, कला र शिल्प, खाना पकाउने, औषधि सम्बन्धी अल्पकालीन पाठ्यक्रमहरू भन्दा कम अवधि6महिना
सम्मको स्वैच्छिक कार्य 1 जुन महिना मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दैन
व्यापार भिसा भारत को लागी
औद्योगिक / व्यापार उद्यम स्थापना गर्न
बिक्री / खरीद / व्यापार को लागी
प्राविधिक / व्यापार बैठकहरूमा भाग लिन
जनशक्ति भर्ती गर्न
प्रदर्शनीहरुमा भाग लिन, व्यापार सम्मेलन
व्यापार मेलामा भाग लिन
चलिरहेको प्रोजेक्टको सम्बन्धमा विशेषज्ञ / विशेषज्ञको रूपमा कार्य गर्ने
भ्रमणहरू सञ्चालन गर्न
व्याख्यान प्रदान गर्न
नोट: व्यवसाय भिसाले विभिन्न प्रकारका व्यापार मेलाहरू, औद्योगिक मेला अपहरू, व्यवसायिक गोष्ठीहरू, सेमिनारहरू व्यापार मेलाहरू र व्यापार सम्मेलनहरूमा भाग लिन अनुमति दिन्छ। सम्मेलन भिसा आवश्यक पर्दैन जबसम्म भारत सरकारले यस कार्यक्रमको आयोजना गर्दैन।
भारतको लागि मेडिकल भिसा
मेडिकल एटेंडन्ट भिसा भारतका लागि
बिरामीको नर्सका लागि, हेरविचार गर्ने स्टाफको। मेडिकल एटेंडन्ट भिसा भारतका लागि स्वतन्त्र भिसा होईन। मुख्य बिरामी विवरणहरू मेडिकल एटेंडन्ट भिसा जारी गर्नका लागि आवश्यक छ।
भारत सरकारले यस प्रकारको लागि भारत भिसा इलेक्ट्रोनिक रूपमा (भारत eVisa) लागू गर्न प्रयोग गर्न सजिलो विधि प्रदान गरेको छ।3अनलाइन वेबसाइट विधि प्रयोग गर्ने यात्रुहरूको मुख्य कोटीहरू, व्यापार यात्रीहरू, पर्यटकहरू र सरल अनलाइन मार्फत चिकित्सा यात्रीहरू आवेदन फारम.
अनलाइन आवेदन दिनका फाइदाहरू
केवल आफ्नो भारतको ई-भिसा अनलाइन प्रसंस्करणको सबै भन्दा महत्वपूर्ण लाभहरू मात्र हुन्।
24 / 365 अनलाइन अनुप्रयोग।
कुनै समय सीमा छैन।
भिसा विज्ञहरु द्वारा आवेदन संशोधन र सुधार भारतको गृह मंत्रालयमा पेश गर्नु अघि।
सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया।
हराइरहेको वा गलत जानकारीको सुधार।
गोपनीयता सुरक्षा र सुरक्षित फारम।
प्रमाणीकरण र थप आवश्यक जानकारीको प्रमाणीकरण।
समर्थन र सहयोग 24/7 इमेल बाट।
तपाईंको स्वीकृत भारतीय इलेक्ट्रोनिक भिसा पीडीएफ ढाँचामा ईमेल मार्फत पठाइयो।
तपाईको इवीसाको ईमेल रिकभरी घाटा भएमा।
सेवा फिर्ती यदि तपाईंको eVisa अस्वीकृत छ।
को कुनै अतिरिक्त बैंक लेनदेन शुल्क छैन 2.5%.